Ph ထဲမှာ EXO အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ph no တွေဘဲ စိုးမိုးနေတဲ့ အကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ Kai
Copyright © 2022 News Bar Co., Ltd. All Rights Reserved
EXO အဖွဲ့ဝင် Kai ဟာ idol, model, ambassador အစရှိတဲ့ career တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေသူမို့ သူ့ ph contact စာရင်းဟာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ နာမည်ကြီးသူတွေရဲ့ ph no အများကြီးနဲ့ပြည့်နေမှာ အသေအချာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ Kai ဟာ သူ့ member တွေရဲ့ ph no တွေကိုသာ အများဆုံးမှတ်ထားလေ့ရှိတယ်ဆိုတာ တွေးမိကြပါရဲ့လား ပရိသတ်ကြီးရေ။
ဘယ်လောက်တောင်လည်းဆို ph contact စာရင်းရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်က EXO member တွေရဲ့ number တွေချည်းပါဘဲတဲ့။ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေက (၁၀) ယောက် မကျော်ပေမဲ့ contact တွေများနေတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ph no တွေချိန်းသွားသည့်တိုင် Kai က မဖျက်ပစ်ဘဲ ဆက်မှတ်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သိတဲ့ အတိုင်း EXO အဖွဲ့ debut တာ (၁၀) နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။ မ debut ခင်ထဲက အတူတူ training ဆင်းခဲ့ရတဲ့အတွက် ခင်မင်လာတာလည်း ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လောက်ပါပြီ။ နည်းပညာမြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း ခေတ်ပေါ် ph တွေ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ပြောင်းကိုင်ကြပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ saesaeng တွေနှောင့်ယှက်လို့ ph number တွေလည်း ချိန်းရပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ Kai ကတော့ ph number အဟောင်းတွေ မဖျက်ပစ်ပါဖူး။ ph number အသစ်တွေကို မတူညီတဲ့ နာမည်နဲ့ ထပ်တိုးမှတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သူ ဘယ်လိုမှတ်လည်းဆိုတာ ခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “ဥပမာ D.O. ကို ခေါ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့။ Contact ထဲမှာ နာမည်ရိုက်ရှာလိုက်ရင် kyungsoo, D.O. ဆိုပြီး မတူတဲ့ နာမည်တွေအများကြီးကျလာလိမ့်မယ်။ လောလောဆယ် သူ့နံပါတ်ချည်းဘဲ4ခုလောက်ရှိတယ်။ Sehun ဆိုလည်း “Sehun-ie,” “Oh Sehun,” အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အာ့အပြင် “Seoul-ie!” လို့တောင် မှတ်ထားသေးတယ်”
“Seoul-ie” ဆိုတာက sehun ကို debut ခါစက Kai ပေးထားတဲ့ နာမည်ပြောင် ပါ။ ခုချိန်ထိ မှတ်ထားတာ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Kai က သူ့အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားသလည်းဆိုတာတွေ့ရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အဖွဲ့ထဲကထွက်သွားတဲ့ member ဟောင်းတွေရဲ့ နံပါတ်ကိုလည်း သိမ်းထားရင် သိမ်းထားနိုင်လောက်ပါတယ်နော်။ တကယ်သာဆို OT12 forever ပါဘဲနော် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…
Next မြင်တာနဲ့ အသည်း‌ယားစေတယ်,လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ခရုတီ ထိုင်း BL စုံတွဲ (၉) တွဲ »
Previous « "Princess Hours" remake မှာ အဓိကဇာတ်​ဆောင်အဖြစ် ပရိသတ်​တွေ ​ရွေးချယ်ကြတဲ့ မင်းသားမင်းသမီးများ
ခရစ်စမတ်နေ့မှာ BTS အဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရကြောင်း HYBE အသိပေး
Kpop idol တစ်ယောက်ရဲ့ သီချင်းကို Challenge က ခဲ့တဲ့ “Emily In Paris” ကားထဲက မင်းသမီးနှစ်ယောက်
Idol ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်, လို့ပြောတိုင်း ဘယ်သူကမှ အယုံအကြည်မရှိခဲ့ကြကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ V
All-rounder ကြယ်ပွင့်တစ်ဦး ပေါ်ထွက်ခြင်း ၁၀ နှစ်ပြည့် (သို့) Lay ရဲ့ အောင်မြင်မှု ၁၀ နှစ်ပြည့်
ပွဲဦးထွက်ပြီး ၁၈ ရက်နဲ့တင် BTS ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စံချိန်တစ်ခုကို ချိုးဖျက်လိုက်နိုင်တဲ့ GOT The Beat
BL XiaoWen completes “Eternal Faith” well despite uncertain future
Who will win the Best Actress of the Year award among the top stars?
ဘောလုံးကစားသမားချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ့် T-ara အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Soyeon
8 K-Pop bands that have won the Rookie Grand Slam in the K-Pop world
MYiDOL mobile app